Global Voices teny Malagasy » Tsy Nahalala, Nisotro Rano Voapoizina Nandritra Ny Andro Dimy Ny Tanànan’i Handan Any Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Tsy Nahalala, Nisotro Rano Voapoizina Nandritra Ny Andro Dimy Ny Tanànan'i Handan Any Shina
Voadika ny 07 Janoary 2013 8:26 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Nisotro, nandro sy nisasa taminà rano misy poizina nandritra ny dimy andro ny mponina tao amin'ny tanànan'i Handan any Shina. Voapoizin'ny loto indostrialy avy ao amin'ny faritanin'i Shanxi mpifanolo-bodirindrina anminy ilay tena loharanon-dranon'ny tanàna – ny reniranon'i Zhanghe  – tamin'ny 31 Desambra 2012. Kanefa, tsy nisy nitatitra ilay fahapoizinana ny avy amin'ny governemanta ao an-toerana raha tsy efa dimy andro taty aoriana, rehefa notapahana tsy nisy fampilazana ny rano tao an-tanànan'i Handan ny 5 Janoary 2013.
Ny governemantan'i Shanxi  milaza hoe fahatapahana fantsona tao amin'ilay orinasa mpikirakira akora simika ao an-tanànan'i Changzhi no niteraka ‘aniline,’ akora pozina simika niparitaka tany amin'ny faritra avon'ilay renirano Zhanghe.
Araka ny vaovao  [zh] farany, avy aminà orinasam-panjakana iray ilay akora simika niparitaka : Shanxi Tianji Coal Chemical Industry Group, ary nitatra hatrany amin'ny tanànan'i Anyang  any amin'ny faritanin'i Henan any Shina ilay fahapoizinana.
Mponina milahatra hividy rano mineraly tamin'ireo toeram-pivarotana lehibe tao an-toerana , tao Handan, faritanin'i Henan .(Dikasary avy amin'ny Youku).
Ho setrin'ny fangataham-panazavana iray momba ny fahataran'ny tatitry ny Changzhi momba ilay loza, ny lehiben'ny fampitam-baovao Changzhi, Wang YiPing niteny hoe [zh]:
Taterinay mifanaraka amin'ny fepetra, tsy nanemotra ny tatitra ho afaka dimy andro izahay. Raha mbola ao anatin'ny faritr'i Changzhi hatrany ny fahalotoana, tsy misy ilàna manao tatitra amin'ny governemantam-paritany, azonay atrehana amin'ny fombanay izany, raha toa fotsiny mivoaka ny faritry ny tanànan'i Changzhi ny loto dia mila mitatitra amin'ny governemantam-paritany izahay. Tsy azoko antoka ny momba ny antsipirihany.
Niteraka fanamelohana niparitaka ve tety anaty aterineto ny fanivànan'ny governemanta ao an-toerana ny vaovao sy ny tsy firaharahian-dry zareo ny fanitsakitsahana goavana atao amin'ny tontolo iainana. Fikarohana iray tao amin'ny Sina Weibo no nahitàna vokatra maherin'ny 2.933.094 [zh], nahatonga azy ity ho ny lohahevitra nafàna indrindra tamin'ny 6 Janoary. Amin'ny lafiny iray, tezitra mikasika ireo tranga miverimberina momba ny fanimbàna tontolo iainana ao Shina ireo mpisera anaty aterineto; amin'ny lafiny iray hafa, rangitra mikasika ny nanivanan'ny governemanta ao an-toerana ny vaovao ry zareo.
Ilay mpandalina Lian Peng dia nanoratra  hoe :
Amin'ny maha-avy ao Handan ahy, tena mahatsiaro tezitra mafy aho. Tsy sainina amin'ny fomba matotra mihitsy ny ain'ny olona. Nahoana ny Shanxi no nitatitra mikasika ilay olana mandra-pahatongan'ny dimy andro taty aoriana? Iza no miezaka hanafina ilay vaovao? Na iza na iza tompon'andraikitra tamin'ilay fandotoana ary nanafoana ilay vaovao dia tokony hotazonina ho tompon'andraikitra tamin'ilay loza. Voafetra ihany ny vaovao ananako mikasika azy ity, saingy tiako ny hanontany hoe maninona no ananganana orinasa simika eny akaikinà renirano? Misy fanaraha-maso hentitra ve ao? Teny farany: tsy niraharaha tanteraka ny olan'ny loharanon-drano isika, na ho ela na ho haingana, tsy maintsy handoa ny vidiny maharary amin'izany.
Ny Tale mpanatanteraka ao amin'ny tranonkala E-commerce  Zhao Peng nanoratra hoe :
Izay mety ho karazana politika dia mifamatotra hatrany amin'ny tombotsoan'ireo antoko isan-karazany. Ny sivana natao ny tranga tao Shanxi dia niarovana ireo manampahefana izay nanafina ny vaovao sy ireo olona tompon'andraikitra tamin'ny fandotoana, saingy nahatohina ireo olona miaina ao amin'ny reniranon'i Zhanghe ilay izy, ary ny fahasalaman-dry zareo sy ny ainy no sandan'izany.
Ilay olo-malazan'ny media sosialy, Xue Manzi , dia nitaky ny mba hisian'ny fanaraha-maso tsaratsara kokoa ny tontolo iainana :
Mitranga mifandimbindimby ny loza ara-tontolo iainana avy amin'ireo orinasa ao Shina, saingy zara raha misy taterina, ity fomba “fiantohana ny fitoniana” ity dia mandray ny ain'ny olona ho toy ny fananany maimaim-poana! Ny olana saropady toy izany, rehefa tsy voatatitra ara-potoana avy hatrany, dia hahavoa olona an-tapitrisa tsy nisy fampitandremana, heloka bevava izany! Heloka bevava ny fandotoana! Ny fisafidianana tsy hiraharaha ny fandotoana dia heloka bevava goavana! Tsy maintsy miady varotra amin'ny governemanta isika mikasika ny fandotoana ny tontolo iainana, ho an'ireo andian-taranaka hoavy!.
Ny tonian-dahatsoratry ny ifeng news Meng Hui  nanely ny hoe :
Mahakasika ain'olona an-tapitrisa ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety.
Bilaogera iray monina ao an-tanànan'i Handan nanoratra hoe  :
Nisotro rano voapoizina nandritra ny dimy andro izahay, sarotra be ny hisaintsaina ny ho fiantraikany. Iza no handray ny andrikitra amin'io? Iza no afaka hizaka ny andraikitra? Tsy misy fomba hafa, fa sosokevitra ny ahy ny tokony handehanan'ny olona hitroka ny vavoniny mba hampadio azy. Kanefa, tsy misy zavatra azontsika hatao mba hamafàna ny dona ateraky ny fandotoana natao antsika, miaina mandrakariva eo ambanin'ny horohoro noho ny fanafenana ny marina isika, tena mampihenjan-kozatra an!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/07/44181/
 governemantan'i Shanxi: http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-01/06/content_16086393.htm
 niteny hoe: http://news.sina.com.cn/c/2013-01-06/150925967237.shtml
 vokatra maherin'ny 2.933.094 : http://huati.weibo.com/26716?refer=index_hot_new&pos=1_1&ver=5&order=time
 dia nanoratra: http://weibo.com/lianpeng?topnav=1&wvr=5&topsug=1
 tranonkala E-commerce: http://www.qianpin.com
 nanoratra hoe: http://weibo.com/qianpinzhaopeng
 Xue Manzi: http://weibo.com/charlesxue?from=profile&wvr=5&loc=tabprofile
 Meng Hui: http://weibo.com/u/2711572461
 nanoratra hoe: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ae32c0701015thn.html